Book | Hla Hla Htay's Notes
Let’s speak Myanmar　(Burmese) … for 日本の友達 September 16, 2015
Filed under: Book,Japan,Language,Myanmar — hhh123 @ 5:51 am
Tags: Burmese, Japan, Japanese, Learning, Myanmar, Speaking
These are words and sentences from Point and Speak …https://hhh123.wordpress.com/2013/03/23/point-and-speak-%E6%97%85%E3%81%AE%E6%8C%87%E3%81%95%E3%81%97%E3%80%80%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E5%B8%B3/
Myanmar Phonetic in Katakana
ဘယ်မှာရှိသလဲ	 ဘယ္မွာရွိသလဲ	 ベーマーシダレー	 ___は　どこにありますか？
ပစ္စည်းမလာသေးဘူး	 ပစၥည္းမလာေသးဘူး။	 ピッスィｰマラーゼーブー	 荷物が　出て　きません。
ဖုန်းငှားလို့ရမလား။	 ဖုန္းငွားလို႕ရမလား။	 ポウン　ガーロォヤッマラー	 電話をかりていいですか。
ဟလို —- ခေါ်ပေးပါ။	 ဟလို —- ေခၚေပးပါ။	 ハロー　コーペーバー	 もしもし　を呼んで　ください。
စီးချင်လို့ပါ။	 စီးခ်င္လို႕ပါ။	 スイージンロｵバー	 ＿を　のりたいですが。
ကိုသွားချင်တယ်။	 ကိုသြားခ်င္တယ္။	 ゴー　トワーチンデー	 ＿へ　行きたいです。
ဟိုတယ်	 ဟိုတယ္	 ホーテー	 ホテル
တီဗွီ	 တီဗြီ	 ティービー	 テレビ
ပန်ကာ	 ပန္ကာ	 パンカー	 扇風機
စောင်	 ေစာင္	 サウン	 毛布
ပြတင်းပေါက်	 ျပတင္းေပါက္	 バディンバウッ	 窓
ဆိုင်	 ဆိုင္	 サイン	 店
ဘတ်စကား	 ဘတ္စကား	 バスカー	 バス
တက္ကစီ	 တကၠစီ	 タクスィー	 タクシー
လာကြိုမယ်	 လာၾကိဳမယ္	 ラーチョーメー	 迎えに来ます
မယူပါနဲ့။	 မယူပါနဲ႕။	 マユバーネ	 持って行かない
မီးရထား	 မီးရထား	 ミーヤター	 汽車
ဗီဇာ	 ဗီဇာ	 ビーザー	 ビザ
နှုတ်ဆက်စကား	 ႏႈတ္ဆက္စကား	 ﾌノウッセッサカー	 あいさつ
မင်္ဂလာပါ	 မဂၤလာပါ	 ミンガラーバー	 こんにちは
တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။	 ေတြ႕ရတာဝမ္းသာပါတယ္။	 トゥェヤァダー　ワンターバーテー	 はじめまして
နေကောင်းရဲ့လား။	 ေနေကာင္းရဲ့လား။	 ネーカウンイェラー	 お元気ですか・
ကောင်းပါတယ်။	 ေကာင္းပါတယ္။	 カウンバーデー	 げんきです。
မကောင်းပါဘူး။	 မေကာင္းပါဘူး။	 マカウンバーブー	 げんきじゃないです。
ထမင်းစားပြီးပြီလား။	 ထမင္းစားျပီးျပီလား။	 タミンサーピービーラー	 御飯　食べた？
စားပြီးပြီ။	 စားျပီးျပီ။	 サーピービー	 食べました
မစားရသေးဘူး။	 မစားရေသးဘူး။	 マサーヤァ　ゼービー	 まだ　食べていません
ကြိုဆိုပါတယ်။	 ၾကိဳဆိုပါတယ္။	 チョーソーバーデー	 ようこそ
ကေျးဇူးတင်ပါတယ်။	 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။	 チェーズーティンバーデー	 ありがとうございます。
ကေျးဇူးပဲ။	 ေက်းဇူးပဲ။	 チェーズーバー　 ありがとう
ခွင့်လွှတ်ပါ	 ခြင့္လႊတ္ပါ	 クイン　ﾌルッパー	 ありがとう
ကန်တော့ပါရဲ့	 ကန္ေတာ့ပါရဲ့	 ガドォバーイェ	 すみません
ကိစ္စမရှိပါဘူး	 ကိစၥမရွိပါဘူး	 ケイサァ　マシィバーブー	 大丈夫です
ရပါတယ်	 ရပါတယ္	 ヤァバーデー	 いいですよ
ဘယ်သွားမလဲ	 ဘယ္သြားမလဲ	 ベートワーマレー	 どこへ行くの？
ကျနော့်ရဲ့နာမည်က ပါ （男）	 က်ေနာ့္ရဲ့နာမည္က ပါ	 チャノォイェ　ナーメー　。。。バー	 私の名前は・・・　です。
ကျမရဲ့နာမည်က ပါ （女）	 က်မရဲ့နာမည္က ပါ	 チャマァイェ　ナーメー　。。。バー	 私の名前は・・・　です。
ခင်ဗျားရဲ့ နာမည် ဘာလဲ　（男）	 ခင္ဗ်ားရဲ့ နာမည္ ဘာလဲ	 カミャーイェ　ナーメー　。。。バー	 あなたの名前はなんですか。
ရှင့်ရဲ့ နာမည် ဘာလဲ　（女）	 ရွင့္ရဲ့ နာမည္ ဘာလဲ	 シンッイェ　ナーメー　。。。バー	 あなたの名前はなんですか。
ခွင့်ပြုပါဦး	 ခြင့္ျပဳပါဦး	 クイン　ピュゥ　バー　オウン	 失礼します。
ပြန်တွေ့ပါမယ်။	 ျပန္ေတြ႕ပါမယ္။	 ピャン　トゥェ　バーメー	 また会いましょう。
သွားတော့မယ်။	 သြားေတာ့မယ္။	 トワー　ドォ　メー	 さよなら/もう行きます。
ဟုတ်ကဲ့ပါ	 ဟုတ္ကဲ့ပါ	 ホウッケェバー	 はい
တာ့တာ	 တာ့တာ	 ターター	 バイバイ
ဟုတ်ပါတယ်။	 ဟုတ္ပါတယ္။	 ホウッ　パーデー	 はい　そうです。
မဟုတ်ပါဘူး.	 မဟုတ္ပါဘူး.	 マホウッ　パーブー	 いいえ　ちがいます。
ကိုရောက်ဖူးပါတယ်။	 ကိုေရာက္ဖူးပါတယ္။	 。。。ゴー　ヤウッ　プーバーデー	 へ　行ったことがあります。
ကိုမရောက်ဖူးပါဘူး။	 ကိုမရောက်ဖူးပါဘူး။	 。。。ゴー　マヤウッ　プーゼービー	 へ　また　行ったことがありません。
အလုပ် ဘာလုပ်နေလဲ	 အလုပ္ ဘာလုပ္ေနလဲ	 アロウッ　バーロウッネーレー	 仕事はなんですか。
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား　（男）	 တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား	 テッカトー　チャウンター	 だいがくせい
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ　（女）	 တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ	 テッカトー　チャウンドゥー	 大学生
ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်း	 ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္း	 コウンパニー　ウンダン	 かいしゃいん
ပြည့်သူ့ ဝန်ထမ်း	 ျပည့္သူ႕ ဝန္ထမ္း	 ピードゥ　ウンダン	 公務員
ကျောင်းဆရာ　（男）	 ေက်ာင္းဆရာ	 チャウンサヤー	 教師
ကျောင်းဆရာမ　（女）	 ေက်ာင္းဆရာမ	 チャウンサヤーマァ	 きょうし
ဆရာဝန်	 ဆရာဝန္	 サヤーウン	 医者
အင်ဂျင်နီယာ	 အင္ဂ်င္နီယာ	 インジニーアー	 エンジニア
ကားမောင်းသမား	 ကားေမာင္းသမား	 カーマウンダマー	 運転手
ဆိုင်ရှင်	 ဆိုင္ရွင္	 サインシン	 てんしゅ
သင်္ဘောသား	 သေဘၤာသား	 ティンボーダー	 船乗り
လယ်သမား	 လယ္သမား	 レーダマー	 農民
စက်ရုံ	 စက္႐ံု	 セッヨウン	 工場
ခွင့်ယူတယ်	 ခြင့္ယူတယ္	 クィンユーデー	 休暇
အလုပ်လက်မဲ့	 အလုပ္လက္မဲ့	 アロウッレッメェ	 無職
မြန်မာ	 ျမန္မာ	 ミャンマー	 ミャンマー
ဗမာ	 ဗမာ	 バマー	 ビルマ
ဂျပန်	 ဂ်ပန္	 ジャパン	 にほん
တရုတ်	 တ႐ုတ္	 タヨウッ	 ちゅうごく
ထိုင်း	 ထိုင္း	 タイン	 タイ
အိန္ဒိယ	 အိႏၵိယ	 エインディヤ	 インド
မလေးရှား	 မေလးရွား	 マレーシャー	 マレーシア
စင်္ကာပူ	 စကၤာပူ	 シンガープー	 シンガポール
Sgaw Kayin – English – Myanmar September 15, 2015
Filed under: Book,Language,Myanmar,University — hhh123 @ 10:11 am
Tags: Karen, Kayin, Sagaw, Sgaw
I always explored to work on our ethnic languages. At my time in UCSY, I even wroteaproposal for maintaining ethnic languages of Myanmar.
I hadachance to supervise Master thesis ofaSgaw Kayin (Sgaw Karen) language speaker (Naw Zin Mar Lar Win, is currently studying at IIT, India). I urged her to digitize Sgaw Kayin- English – Myanmar book for Sgaw Kayin learners (
I will try to find out who compile this book.
Thanks to her efforts, it happens to be invaluable resource.
This book is prepared in
for Sgaw Kayin, and
This is meant for research and academic purpose and kindly give credit to us if you use this resource.
I promise I will try to find time to share such kind of resources.
Minna no Nihongo (Japanese – Myanmar) July 15, 2015
Filed under: Book,Japan,Language,Myanmar — hhh123 @ 3:15 pm
Tags: Japan, Language, Myanmar, Resource, Translation
Last night I foundagood resource for learning Japanese. More information: http://mm-biz.com/minna_no_nihongo_myanmar
Myanmar Grammar : word, phrase November 5, 2014
Filed under: Book,English,Language,Myanmar,NLP — hhh123 @ 2:46 pm
Tags: Burmese, Grammar, MLC, Myanmar, Myanmar Language Comission, Noun, PartOfSpeech
Like many Asian languages , Thai, Laos, and Indian, Myanmar Language (Burmese) has no space written between words. Even mother language , I myself has difficulty in cutting words inasentence . 😛 We need to learn Myanmar Grammar from 6th Grade til 10th Grade for every student. Myanmar Grammar is the most difficult subject for me among all the subjects. It could keep my interest because of difficulty in learning.
I find out how Myanmar Linguists defines word and phrase in Myanmar Grammar Book. (pg 88)
အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ဖော်ပြနိုင်သော စကား အစိတ်အပိုင်း အသီးသီးကို စကားလုံး ဟု ခေါ်သည်။
An independent unit of speech which can express meaning is called word.
အခြား စကားလုံး တစ်လုံး အမှီမပြုဘဲ မိမိဘာသာ အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်သော စကားလုံးကို သီးခြားစကားလုံး ဟုခေါ်သည်။
သွား၊ လာ၊ နီ၊ ဖြူ၊ ဈေး၊ ကျောင်း၊ ကူညီ၊ စောင့်ထိန်း၊ စာအုပ်၊ ကျောက်ခဲ၊ ကျောက်သင်ပုန်း၊
အခြား စကားလုံး၏ အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ကူညီဖော်ဆောင်နိုင်သော စကားလုံးကို အကူစကားလုံး ဟု ခေါ်သည်။
<p သို့၊ မှ၊ က၊ ကို၊ အား၊ သဖြင့်၊ သည်၊ ၏၊ သော်လည်း။
Without depending on the other, the word which can express the meaning itself is called “independent word”.
go, come, red, white, market, school, help, maintain, book, stone, blackboard, bitter gourd
The word which can support in describing the meaning of other word is called “auxiliary word” .
သို့ (to)၊ မှ (from)၊ က၊ ကို၊ အား (to)၊ သဖြင့် (because)၊ သည်၊ ၏ (of)၊ သော်လည်း (although)။
I search both the meaning of “စကားလုံး ” and “ပုဒ် ” in Myanmar-English bilingual dictionary. Both are said “word”. So what will be the difference between them?
သီးခြား စကားလုံးကို လည်းကောင်း၊ သီးခြားစကားလုံး နှင့် အကူ စကားလုံးတို့ကို တွဲစပ် ထားသော စကားလုံးတို့ကို လည်းကောင်း ပုဒ် ဟုခေါ်သည်။
သွား၊ လာ၊ နီ၊ ဖြူ၊ ဈေး၊ ကျောင်း၊ ကူညီ၊ စောင့်ထိန်း၊ ကျောက်ခဲ၊
ကျောက်သင်ပုန်း၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ အကောင်း၊ ကောင်းမှု၊ ရိုသေစွာ၊
တရိုတသေ၊ စားစရာ၊ အမြန်၊ ခံယူချက်၊ ကျန်းမာရေး၊ အဆုံးအဖြတ်၊ ဆရာသည်၊ ဆရာကို၊
အရာအား၊ သွားသည်၊ သွားမည်။
An independent word or the word formed by combining an independent word and auxiliary word is called
သွား (go)၊ လာ (red)၊ နီ (white)၊ ဖြူ၊ (white) ဈေး (market)၊ ကျောင်း(school)၊ ကူညီ (help)၊ စောင့်ထိန်း(maintain)၊ ကျောက်ခဲ (stone)၊
ကျောက်သင်ပုန်း(blackboard)၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး (bitter gourd)၊ အကောင်း(the good)၊ ကောင်းမှု (good deed)၊ ရိုသေစွာ (respectfully)၊
တရိုတသေ (with respect)၊ စားစရာ (food)၊ အမြန် (express)၊ ခံယူချက် (belief)၊ ကျန်းမာရေး (health)၊ အဆုံးအဖြတ် (decision)၊ ဆရာသည်( the teacher(subj)), ဆရာကို (the teacher (obj))၊
အရာအား (to thing)၊ သွားသည် (go)၊ သွားမည် (will go)။
Word can be of four kinds. They are
particle mixed word
preposition linked word
ဝိဘတ်၊ပစ္စည်း တစ်ခုခုမရောဘဲ အနက်အဓိပ္ဂာယ် တစ်ခုကို ဖော်ပြနိုင်၍ သီးခြားရပ်တည်နိုင်သော စကားလုံးကို ပုဒ်ရိုးဟုခေါ်သည်။
အိမ်၊ စကား၊ သနား၊ ကဲ့ရဲ့၊ လိမ္ဓာ၊ ခမ်းနား။
A word which can stand independently and can express the meaning without mixing with any preposition or conjunction is called simple word.
အိမ် (home)၊ စကား (word)၊ သနား (sympathy)၊ ကဲ့ရဲ့ (dispraise)၊ လိမ္ဓာ (clever)၊ ခမ်းနား (splendid)။
ဝိဘတ်ပစ္စည်း၊ သမ္ဗတစ်ခုခုကို ကြား၌မခံဘဲ သီးခြား စကားလုံး (၂)လုံး (၃)လုံး စသည်တို့ကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပုဒ်ကို ပေါင်းစပ်ပုဒ် ဟုခေါ်သည်။
သာဓက။ ။မီးရထား(မီး+ရထား)၊ ကုန်တင်ကား(ကုန်+တင်+ကား)။
The word formed by combining two or three simple words without affixing or buffering any preposition, particle or conjunction is called compound word.
ကုန်တင်ကား(ကုန်+တင်+ကား) —truck (commodity+ carry+ car)
ခုတ်ထစ်(ခုတ်+ထစ်)—chop(cut+makeanick or notch)
စားသောက်(စား+သောက်)—take food (eat+drink)
ဖြူစင်(ဖြူ+စင်)— clean (white+pure)
သီးခြားစကားလုံးတစ်လုံးကို အကူစကားလုံးတစ်လုံးနှင့် ရောနှောခြင်းဖြင့် အနက်အဓိပ္ဂာယ်တစ်ခု ထွက်လာသော ပုဒ်ကို ပစ္စည်းရောပုဒ် ဟု ခေါ်သည်။
သာဓက။ ။အကောင်း(အ+ကောင်း)၊ကောင်းမှု(ကောင်း+မှု)၊ရိုသေစွာ(ရိုသေ+စွာ)၊ တရိုတသေ(တ+ရိုတ+သေ)၊
An particle mixed word is thataword is formed and become meaningful after affixing or mixing an auxiliary word to an independent word.
အကောင်း(အ+ကောင်း) goodness ၊ကောင်းမှု(ကောင်း+မှု) good deeds၊ရိုသေစွာ(ရိုသေ+စွာ) respectfully၊ တရိုတသေ(တ+ရို+တ+သေ) with respect၊
စားစရာ(စား+စရာ) food in which အ, မှု,စွာ,တ,and စရာ are particles.
ဝိဘတ်တစ်ခုခုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော ပုဒ်ကိုဝိဘတ်သွယ်ပုဒ်ဟုခေါ်သည်။
A word linked with any preposition is called preposition linked word.
(The teacher) ဆရာသည်(ဆရာ+သည်)၊ (Yesterday) မနေ့က(မနေ့+က)၊ (by car)ကားဖြင့်(ကား+ဖြင့်)၊ (come) လာ၏(လာ+၏)။
ပုဒ်(၂)ပုဒ်၊(၃)ပုဒ် စသည်တို့၏ အကြား၌ ဝိဘတ်၊ပစ္စည်း၊ သမ္ဗန္ဓတစ်ခုခုကိုထားလျက် ဖြစ်စေ၊ပုဒ်(၂)ပုဒ်၊(၃)ပုဒ် စသည်တို့၏ နောက်၌သမ္ဗန္ဗ(၂)ခု၊(၃)ခု စသည်တို့ကို ထားလျက်ဖြစ်စေ ဆက်ထားသော ပုဒ်ကို ပုဒ်စု ဟုခေါ်သည်။
ပုဒ်စုကို (၃)မျိုးခွဲသည်။ ၄င်းတို့မှာ-
Placing any preposition or particle or conjunction between two or three words, or suffixing two or three conjunctions to two or three words are combined to formaphrase (collection of word).
A phrase isacollection of words which is formed by placing any preposition or particle or conjunction between two or three words, or suffixing two or three conjunctions between them.
Phrase are of three types. They are
preposition linked phrase
particle linked phrase
conjunction linked phrase
ဝိဘတ်ဆက်ပုဒ်စု ။ ။
နာမ်နှင့်နာမ်တို့ကို ဖြစ်စေ၊နာမ်နှင့်နာမ်စားတို့ကို ဖြစ်စေဝိဘတ်ဖြင့်ဆက်ထားသော ပုဒ်စုကို ဝိဘတ်ဆက်ပုဒ်စု ဟုခေါ်သည်။
Either two nouns, or noun and pronoun which are connected withapreposition is called preposition linked phrase.
U Ba’s son (U Ba +’s+son), Guest from Mandalay (Mandalay+preposition+guest)
ပစ္စည်းဆက်ပုဒ်စု ။ ။
နာမဝိသေသနနှင့် နာမ်တို့ကိုဖြစ်စေ၊ကြိယာနှင့်နာမ်တို့ကိုဖြစ်စေ၊နာမ်နှင့် နာမ်စားတို့ကိုဖြစ်စေ ပစ္စည်းဖြင့်ဆက်ထားသော ပုဒ်စုကို ပစ္စည်းဆက်ပုဒ်စု ဟု ခေါ်သည်။
Either an adjective andanoun , oraverb andanoun, oranoun andapronoun which are connected withaparticle is called particle linked phrase.
Clever Mg Ba, (Clever+particle+ Mg Ba), Coming day (come+particle+day), person like him (him+like+person)
သမ္ဗန္ဓဆက်ပုဒ်စု ။ ။
နာမ်နှင့်နာမ်တို့ကိုဖြစ်စေ၊နာမ်နှင့် နာမ်စားတို့ကိုဖြစ်စေ၊ကြိယာနှင့် နာမ်တို့ကိုဖြစ်စေ သမ္ဗန္ဓဖြင့် ဆက်ထားသော ပုဒ်စုကို သမ္ဗန္ဓဆက်ပုဒ်စု ဟုခေါ်သည်။
သာဓက။ ။မောင်ဘနှင့် မောင်လှ(မောင်ဘ+နှင့်+မောင်လှ)၊
မောင်ဘဖြစ်စေ၊ကျွန်တော်ဖြစ်စေ (မောင်ဘ+ဖြစ်စေ+ကျွန်တော်+ဖြစ်စေ+)၊ ချိုးဖို့ရေ(ချိုး+ဖို့+ရေ)။
Either two nouns , oranoun andapronoun, oraverb andanoun which are connected withaconjunction is called conjunction linked phrase.
Mg Ba and Mg Hla (Mg Ba+ conjunction+ Mg Hla, either Mg Ba or I (Mg Ba+ conjunction+ I + conjunction), water for bath (bath+conjunction+water)
Credit to ZarChiOo and my brother for checking my English. 🙂
PS. To see Myanmar fonts, please install http://my.duniakitab.com/ThanLwinSoft/ThanLwinSoft/Downloads/Keyboards/Ekaya-0.1.9+MyanmarFonts_x86.exe
Visit the page http://my.duniakitab.com/ThanLwinSoft/ThanLwinSoft/Downloads/if not MS windows.
Myanmar Grammar : Nouns -3 October 10, 2014
Filed under: Book,English,Language,Myanmar,NLP — hhh123 @ 4:01 pm
According to their morphological composition, nouns can be of four types:
ဖွဲ့​စည်း​တည်ဆောက်​ပုံ​အရ နာမ် (၄)မျိုးရှိ​သည်။ ၄င်း​တို့​မှာ-
ပင်​ကို​နာမ် (Simple Noun)
မြန်မာ​သဒ္ဒါနည်း​ဖြင့်​ခွဲစိတ်​၍​လည်း​မ​ရ၊ ပေါင်း​စပ် ဖွဲ့​စည်း​ထား​ခြင်း​လည်း မဟုတ်၊ မူလ​အတိုင်း​ဖြစ်​သော နာမ်​ကို ပင်​ကို​နာမ် ဟုခေါ်​သည်။
(၁) လူ၊ ငါး၊ နေ အစ​ရှိ​သည်​တို့​သည် ခွဲစိတ်​၍​လည်း​မ​ရ၊ ပေါင်း​စပ်​ဖွဲ့​စည်း​ထား ခြင်း​လည်း မဟုတ်​သော ပင်​ကို​နာမ် များ ဖြစ်​ကြ​သည်။
စပါး​ဟူ​သော နာမ်​သည် ခွဲစိတ်​၍​လည်း​မ​ရ၊ ပေါင်း​စပ်​ဖွဲ့​စည်း​ထား​ခြင်း​လည်း မဟုတ်​သော နာမ်​ဖြစ်​သည်။ စပါး​၏ ဆိုလို​ရင်း​အနက်​မှာ “ပူအိုက်​စွတ်စို​သော အရပ်​တို့​တွင် ဆန်​အလို့​ငှာ စိုက်ပျိုး​ရ​သော ကောက်​ပင် ” ဖြစ်​သည်။
စပါး​ကို ခွဲစိတ်​လိုက်​လျှင် စ​နှင့်​ပါး​ဟူ​သော အစိတ်​အပိုင်း(၂)ခု​ကို ရ​မည်။ သို့​ရာ တွင် စ​သည်​လည်းကောင်း၊ ပါး​သည်​လည်းကောင်း စပါး​၏ ဆိုလို​ရင်း အနက်​ကို မ​ပေး​နိုင်​ချေ။ ခွဲစိတ်​ခြင်း​ဖြင့်​မူလ​အဓိပ္ပာယ်​မှာ ပျက်​သွား​သည်။ ထို့​ကြောင့် စပါး​သည် ခွဲစိတ်​မ​ရ​သော နာမ်​ဖြစ်​သည်။
(၂) ပညာ၊ ကရုဏာ၊ သညာ၊ ဒုက္ခ အစ​ရှိ​သော နာမ်​ပုဒ်​တို့​မှာ​မူ မြန်မာ ဘာသာ စကား​တို့​တွင် အသုံး​တွင်ကျယ်​နေ​ပြီ​ဖြစ်​သည့် ပါဋ္ဌိ​ဘာသာ​စကား​များ ဖြစ်​ကြ​သည်။ ထို​စကားလုံး​များ​ကို ပါဠိ​ဘာသာ စကား​တွင် ခွဲခြမ်း​စိတ် ဖြာ​နိုင်​မည် ဖြစ်သော်​လည်း မြန်မာ​သဒ္ဒါနည်း​အား​ဖြင့်​ခွဲခြမ်း​စိတ်ဖြာ​၍ မ​ရ​နိုင် ခြင်း​ကြောင့် ၎င်း​တို့​သည်​လည်း ပင်​ကို​နာမ် များ​ပင်​ဖြစ်​ကြ သည်။
(ထို​နည်း​အတူ ဒ​ရိုင်​ဘာ၊ ဒါ​ရိုက်​တာ အစ​ရှိ​သော နာမ်​များ​သည် အင်္ဂလိပ်​ဘာသာ စကား​မှ တိုက်ရိုက် မွေးစားထား​သော စကားလုံး​များ ဖြစ်​ကြ​သည်။ ၎င်း​တို့​ကို အင်္ဂလိပ်​ဘာသာ ဘာသာ​စကား​၌ ခွဲခြမ်း​စိတ်ဖြာ​နိုင်​မည် ဖြစ်သော်​လည်း မြန်မာ ဘာသာ စကား​တွင် ဒ​ရိုင်​ဘာ၊ ဒါ​ရိုက်​တာ စ​သည်​ဖြင့်​အသုံး​တွင် ကျယ် နေ​ပြီ​ဖြစ်​ပြီး မြန်မာ​သဒ္ဒါ နည်း​အား​ဖြင့်​ခွဲခြမ်း​စိတ်ဖြာ​၍ မ​ရ​နိုင် ခြင်း​ကြောင့် ၎င်း​တို့​သည်​လည်း ပင်​ကို​နာမ် များ​ပင်​ဖြစ်​ကြ သည်။
The word is said simple noun if it is not compound word and not divisible grammatically.
လူ (man),ငါး (fish),နေ (sun) are not compound words and not divisible grammatically. All monosyllable nouns are “simple noun”. However, Myanmar words are composed of one or more syllables. Even if the word is divisible into syllables, the components can not give original meaning.
For example, if The word “စပါး (rice)”is divided, two syllables “စ” and “ပါး” will be obtained.
However, either “စ (start)” or “ပါး (cheek)” has no related meaning to the word “စပါး (rice)”.
Division will be lost its original meaning. Therefore, “စပါး (rice)” isaindivisible noun.
(2) The nouns such as ပညာ(knowledge)၊ ကရုဏာ(sympathy)၊ သညာ(perception)၊ ဒုက္ခ (suffering) are words from Pali language which are widely used in Myanmar language. Although these words could be divided and analyzed in Pali language, they can not be divisible by Myanmar grammar. Therefore, they are also simple nouns.
Likewise, the nouns such as ဒ​ရိုင်​ဘာ (driver)၊ ဒါ​ရိုက်​တာ (director) are words directly borrowed from English language. They could be divided and analyzed in English language. These words are widely used in Myanmar and they can not be divisible by Myanmar grammar. Therefore, they are also simple nouns.
ဂုဏ်​အရည်အချင်း​ပြ​ပုဒ်​များ​၏ ရှေ့​၌​ဖြစ်​စေ၊ နောက်​၌​ဖြစ်​စေ၊ ပစ္စည်း​ဆက်​၍​ဖြစ်​စေ​လာ​သော နာမ်​ကို ဂုဏ်​ရည်​ပြ​နာမ် ဟုခေါ်​သည်။
သာဓက။ ။အကောင်း၊ ကောင်းမှု၊ ကောင်း​ခြင်း၊ အလှ၊ လှ​ခြင်း၊ အပျော်၊ ပျော်​စရာ။
(ကောင်း၊ လှ၊ ပျော် တို့​သည် ဂုဏ်​အရည်အချင်း​ပြ​ပုဒ်​များ ဖြစ်​ကြ​သည်။ ၎င်း​တို့ ၏ ရှေ့​၌ ဖြစ်​စေ၊ နောက်​၌​ဖြစ်​စေ၊ အ၊မှု၊ခြင်း၊ရာ၊ဖွယ် စ​သော ပစ္စည်း တို့​ကို ဆက်​လိုက်​သော​အခါ အကောင်း၊ ကောင်းမှု၊ ကောင်း​ခြင်း၊ အလှ၊ လှ​ခြင်း၊ အပျော်၊ ပျော်​စရာ ဟူ​သော ဂုဏ်​ရည်​ပြ​နာမ်​များ ဖြစ်လာ​ကြ​သည်။)
A qualitative noun is one that lays stress on the nature, character, or qualities of the noun (Ref 5). Normally, the qualitative phrase comes from the qualitative adjective. The noun formed by affixing before and after the qualitative phrase is said to be Qualitative Noun.
“good , beautiful, happy ” are qualitative phrases. Originally, adjective usually ends with the particle “သော”. The qualitative phrases are formed by removing the particle “သော“.
(၁) ဂုဏ်​အရည်အချင်း​ပြ​ပုဒ်​များ​၏ ရှေ့​၌​ပစ္စည်း​ဆက်​၍ ဖြစ်လာ​သော ဂုဏ်​ရည်​ပြ​နာမ်​များ
အ + ဆိုး	 = အဆိုး
အ + ကောင်း	 = အကောင်း
အ +	နီ = အနီ
အ +	ဖြူ = အဖြူ
အ +	အေး = အအေး
အ + ပူ	 = အပူ
There are many grammatical similarities with Myanmar and Japanese. Therefore, there are many Myanmars who know Japanese.
For example, あおい（青い） (blue -adjective) becomes noun あお　(blue -noun) when い is removed.
Similarly, たべる （食べる）(eat -verb) becomes noun たべる＋もの　（たべもの　食べ物） (food)　when る is removed and then もの is suffixed.
(1) Nouns formed by the prefixing the particle with qualitative phrases
+ Qualitative phrase
= Qualitative noun
Particle “အ” + bad (adj)	 = the bad
Particle “အ” + good (adj)	 = goodness
Particle “အ” + red (adj) = red (n)
Particle “အ” +	white(adj) = white(n)
Particle “အ” +	cold (adj) = coldness/cold(sickness)/ cold drinks
Particle “အ” + hot	(adj) = heat
(၂) ဂုဏ်​အရည်အချင်း​ပြ​ပုဒ်​များ​၏​နောက်​၌​ပစ္စည်း​ဆက်​၍ ဖြစ်လာ​သော ဂုဏ်​ရည်​ပြ​နာမ်​များ
ကောင်း + မှု	 = ကောင်းမှု
သာယာ + မှု	 = သာယာ​မှု
ထူးခြား + ချက်	 = ထူးခြား​ချက်
ထင်ရှား + ခြင်း	 = ထင်ရှား​ခြင်း
ကျော်​ကြား + ခြင်း	 = ကျော်​ကြား​ခြင်း
ရဲ​ရင့် + ခြင်း	 = ရဲ​ရင့်​ခြင်း
Nouns formed by the suffixing the particle with qualitative phrases
Good + Particle မှု	 = good deeds
pleasant + Particle မှု	 = pleasure
unusal, extraordinary + Particle ချက်	 = something/the extraordinary
wellknown + Particle ခြင်း	 = something/the wellknown
famous + Particle ခြင်း	 = the famous
brave + Particle ခြင်း	 = the brave
(ဂ) ကြိယာ​နာမ်။ ။ကြိယာ​ပုဒ်​၏ ရှေ့​၌​ဖြစ်​စေ၊ နောက်​၌​ဖြစ်​စေ၊ ပစ္စည်း​ဆက် ၍ ဖြစ်လာ​သော နာမ်​ကို ကြိယာ​နာမ် ဟုခေါ်​သည်။
သာဓက။ ။အစား၊ စားဖွယ်၊ လုပ်ဆောင်​ချက်၊ ကူညီ​မှု၊ နေ​စရာ။
(စား၊ လုပ်ဆောင်၊ ကူညီ၊ နေ တို့​သည် ကြိယာ​ပုဒ်​များ​ဖြစ်​ကြ​သည်။ ၎င်း​တို့​၏ ရှေ့​၌​ဖြစ်​စေ၊၊ နောက်​၌​ဖြစ်​စေ၊ အ၊ဖွယ်၊ချက်၊မှု၊ ခြင်း၊ စရာ စ​သော ပစ္စည်း​တို့​ကို ဆက်​လိုက်​သော​အခါ အစား၊ စားဖွယ်၊ လုပ်ဆောင်​ချက်၊ ကူညီ​မှု၊နေ​စရာ ဟူ​သော ကြိယာ​နာမ်​များ​ဖြစ်လာ​ကြ​သည်။)
(3) Verbal Noun: The noun formed by affixing before and after the verbal phrase is said to be Verbal Noun.
Examples: food (အစား), food to eat (စားဖွယ်), performance(လုပ်ဆောင်​ချက်), help (ကူညီ​မှု), the place to stay/live (နေ​စရာ)
Eat (စား), do (လုပ်), help (ကူညီ), live (နေ) are verb phrases. By affixing “အ|ဖွယ်|ချက်|မှု|ခြင်း|စရာ” particles before ad after them, they become verbal nouns.
(၁) ကြိယာ​၏​ရှေ့​၌ ပစ္စည်း​ဆက်​၍ ဖြစ်လာ​သော ကြိယာ​နာမ်​များ
အ + စား	 = အစား
အ + သွား	 = အသွား
အ + ပြော	 = အပြော
အ + မြင်	 = အမြင်
(1) Nouns formed by the prefixing particles with verbal phrases
= Verbal Noun
Particle “အ” + eat	 = food
Particle “အ” + go	 = going; gait; pace
Particle “အ” + speak/tell	 = talk; speech
Particle “အ” + see	 = sight; appearance
(၂) ကြိယာ​၏ နောက်​၌ ပစ္စည်း​ဆက်​၍ ဖြစ်လာ​သော ကြိယာ​နာမ်​များ၊
ကဲ့ရဲ့ + ဖွယ်	 = ကဲ့ရဲ့​ဖွယ်
ပြန်ကြား + ချက်	 = ပြန်ကြား​ချက်
တီထွင် +မှု = တီထွင်​မှု
ခွင့်​ပြု + ခြင်း	 = ခွင့်​ပြု ခြင်း
ပေး +စရာ = ပေး​စရာ
(2) Nouns formed by the postfixing particles with verbal phrases
dispraise + Particle “ဖွယ်”	 = dispraisement
reply (toaquery/question) + Particle “ချက်”	 = response; answer
invent + Particle “မှု ” = invention
permit + Particle “ခြင်း”	 = permission
give + Particle “စရာ” = things to give
ဝိဘတ်၊ ပစ္စည်း၊ သမ္ဗန္ဓ​တို့​ကို ကြား​၌ မ​ခံ​ဘဲ နာမ်၊ ကြိယာ၊ နာမ်စား၊ နာမ​ဝိ​သ​သေ​န၊ ကြိယာ​ဝိ​သ​သေ​န​တို့​ကို ထိုက်​သည့် အားလျော် စွာ ပူးတွဲ​ထား​သော နာမ်​ကို ပေါင်း​စပ်​နာမ် ဟုခေါ်​သည်။
သာဓက။ ။ရေအိုး၊ အိမ်​ဟောင်း၊ မီးခြစ်၊ လက်​ပတ်​နာရီ၊ ပေါက်တူး၊ သောက်ရေ။
The noun formed by pairing/uniting words across part of speech such as Noun, Verb, Pronoun, Adjective, or Adverb without buffering or placing Prepositions, Particles, or Conjunction among the words is said to be compound noun.
Examples : water pot, old house, match, watch, mattock, drinking water
၇။ ဤသို့ ပေါင်း​စပ်​ရာ​တွင် ပါဝင်​ပေါင်း​စပ်​သော ဝါ​စင်္ဂ​ကို လိုက်​၍ အောက်​ပါ အတိုင်း အမျိုး​မျိုး ခွဲ​ခြား​လေ့​လာ​နိုင်​သည်။
(က) နာမ် + နာမ်
(ခ) နာမ်+ နာမ​ဝိသေသ​န
(ဂ) နာမ်+ နာမ​ဝိသေသ​န+ နာမ်
(ဃ) နာမ်+ နာမ်+ နာမ​ဝိသေသ​န
(င) နာမ်+ ကြိယာ
(စ) နာမ်+ နာမ်+ ကြိယာ
(ဆ) နာမ်+ ကြိယာ+ နာမ်
(ဇ) ကြိယာ+ ကြိယာ
(ဈ) ကြိယာ+ နာမ်
It is observed that Nouns are classified as the following according to compounding across part-of-speeches.
(1) Noun + Noun
(2) Noun+ Adjective
(3) Noun+ Adjective+ Noun
(4) Noun+ Noun+ Adjective
(5) Noun+ Verb
(6) Noun+ Noun+ Verb
(7) Noun+ Verb+ Noun
(8) Verb+ Verb
(9) Verb+ Noun
၈။ (က) နာမ်+ နာမ်။ ။နာမ်​ပုဒ်​တစ်​ခု​နှင့် အခြား​နာမ်​ပုဒ်​တစ်​ခု​ကို ပေါင်း​စပ် လိုက်​ခြင်း​ဖြင့် ပေါင်း​စပ်​နာမ်​ဖြစ်လာ​သည်။
Compound noun is formed when two nouns are combined.
ရေ +အိုး	 = ရေအိုး
ရေ +	ခွက် = ရေ​ခွက်
မီး + ရထား	 =မီးရထား
ပင်လယ် + ငါး	 = ပင်လယ်​ငါး
= Compound Noun
water +pot	 = water pot
water +	cup = mug
fire + train	 =railroad train
sea + fish	 = sea fish
(ခ) နာမ်+ နာမ​ဝိ​သ​သေ​န။ ။နာမ်​ပုဒ်​တစ်​ခု​နှင့် နာမ​ဝိသေသ​န​ပုဒ် တစ်​ခု​ကို ပေါင်း​စပ်​လိုက်​ခြင်း​ဖြင့် ပေါင်း​စပ်​နာမ် ဖြစ်လာ​သည်။
Compound noun is formed whenanoun and an adjective is united.
မီး + ပူ	 = မီးပူ
ရေ + နွေး	 = ရေနွေး
အိမ် + ဟောင်း	 = အိမ်​ဟောင်း
တိုက် + သစ်	 =တိုက်​သစ်
fire + hot	 = iron
water + warm	 = warm water
house + old	 = old house
(brick) building + new	 = new building
(ဂ) နာမ်+ နာ​ဝိ​သ​သေ​န+ နာမ်။ ။ နာမ်​ပုဒ်​တစ်​ခု၊ နာမ​ဝိသေသ​န ပုဒ်​တစ်​ခု နှင့် နာမ်​ပုဒ်​တစ်​ခု​တို့​ကို အစဉ်​အတိုင်း ပေါင်း​စပ်​လိုက်​ခြင်း​ဖြင့် ပေါင်း​စပ်​နာမ် ဖြစ်လာ​သည်။
Whenanoun, an adjective andanoun are combined in sequential order, compound noun is formed.
ရေ + နွေး +	အိုး = ရေနွေး​အိုး
ရေ + ပူ +	စမ်း = ရေပူ​စမ်း
ခြေ + လျင် +	တပ် = ခြေ​လျင်​တပ်
water + warm +	pot = kettle; boiler
water + hot +	stream = hot spring
foot + quick +	army = light infantary unit
(ဃ) နာမ်+နာမ်+နာမ​ဝိ​သ​သေ​န။ ။နာမ်​ပုဒ်​တစ်​ခု​နှင့် နာမ​ဝိသေသ​န ပုဒ်​ကို အစဉ်​အတိုင်း ပေါင်း​စပ်​လိုက်​ခြင်း​ဖြင့် ပေါင်း​စပ်​နာမ် ဖြစ်လာ​သည်။
When two nouns, and an adjective are combined in sequential order, compound noun is formed.
ပင်လယ် +ရေ	 +	တိမ် =ပင်လယ်​ရေတိမ်
ပင်လယ် +ရေ	 +ငန်	 =ပင်လယ်​ရေငန်
sea +water	 +	shallow =shallow part of the sea
sea +water	 +	salty =salt water; sea water
(င) နာမ်+ ကြိယာ။ ။ နာမ်​ပုဒ်​တစ်​ခု​နှင့် ကြိယာ ပုဒ်​တစ်​ခု​ကို အစဉ်​အတိုင်း ပေါင်း​စပ်​လိုက်​ခြင်း​ဖြင့် ပေါင်း​စပ်​နာမ်​ဖြစ်လာ​သည်။
Whenanoun, and an adverb are combined in sequential order, compound noun is formed.
ခါး +ပတ်	 = ခါး​ပတ်
ငါး	 +ကြော်	 =ငါးကြော်
ပဲ +လှော်	 = ပဲလှော်
waist + wrap around	 = belt
fish	 +fry	 =fried fish
pea/pulse +roast	 = roasted pea/pulse
(စ) နာမ်+ နာမ်+ ကြိယာ။ ။နာမ်​ပုဒ်​နှစ်​ခု​နှင့် ကြိယာ​ပုဒ်​တစ်​ခု​ကို ပေါင်း စပ်​လိုက်​ခြင်း​ဖြင့် ပေါင်း​စပ်​နာမ် ဖြစ်လာ​သည်။
When two nouns, and an adverb are combined in sequential order, compound noun is formed.
စိန် +	ရင် +	ထိုး = စိန်​ရင်​ထိုး
မြ +လည်	 +ဆွဲ	 = မြ​လည်ဆွဲ
ရွှေ +လက်	 +စွပ်	 = ရွှေ​လက်​စွပ်
diamond +	chest +	attach * = diamond brooch
emerald +neck	 +wear = emerald necklace
gold +hand	 +wear (put on)	 = gold ring
(ဆ) နာမ်+ကြိယာ+နာမ်။ ။နာမ်​ပုဒ်​တစ်​ခု၊ ကြိယာ​ပုဒ်​တစ်​ခု​နှင့် နာမ်​ပုဒ် တစ်​ခု​တို့​ကို အစဉ်​အတိုင်း ပေါင်း​စပ်​လိုက်​ခြင်း​ဖြင့် ပေါင်း​စပ်​နာမ်​ဖြစ်လာ​သည်။
Whenanoun,a verb andanoun are combined in sequential order, compound noun is formed. ( Whenaverb is sandwiched between two nouns, it becomes compound noun. )
တိုက် +	ခံ +	အိမ် = တိုက်​ခံ​အိမ်
ပျဉ် + ထောင်	 +အိမ်	 = ပျဉ်ထောင်​အိမ်
လက် + ပတ်	 +	နာရီ = လက်​ပတ်​နာရီ
Brick building +	Based +	building = Bricked house
wood + stand	 +house = wood house
hand + wrap	 +	clock/watch = watch
(ဇ) ကြိယာ+ ကြိယာ။ ။ ။ကြိယာ​ပုဒ်​နှစ်​ခု​ကို ပေါင်း​စပ်​လိုက်​ခြင်း​ဖြင့် ပေါင်း​စပ်​နာမ် ဖြစ်လာ​သည်။
A compound noun is formed by combining two verbs.
ထွေး +	ခံ = ထွေးခံ
အုပ် +	ဆောင်း = အုပ်ဆောင်း
spit +	accept, receive = spitoon
cover +	cover = mesh food cover;food cover
(ဈ) ကြိယာ+ နာမ်။ ။ကြိယာ​ပုဒ်​တစ်​ခု​နှင့် နာမ်​ပုဒ်​တစ်​ခု​ကို​ပေါင်း​စပ် လိုက် ခြင်း​ဖြင့် ပေါင်း​စပ်​နာမ် ဖြစ်လာ​သည်။
A compound noun is formed by combiningaverb andanoun.
သောက် +	ရေ = သောက်ရေ
ပြုတ် +ဆန်	 = ပြုတ်​ဆန်
လှောင် +	အိမ် = လှောင်​အိမ်
လျက် +	ဆား = လျက်ဆား
ကြိတ် + ဆုံ	 = ကြိတ်ဆုံ
drink +	water = drinking water
boil +rice	 = parboiled rice
enclose , capture +	house = cage
lick +	salt = indigenous medicine
grind + mortar	 = hand mill
indigenous medicine :herbal and mineral preparation inapowder to be licked
Ref 1: http://www.durov.com/study/Grammar-1539.txt
Ref 6: Daniel B. Wallace, “Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament”